အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: comment for rita (မြို့မေတ္တာခံယူမယ့်သားပေမို့)
သေချာတာပေါ့ ကိုယ်လဲ အဲ့လိုလူတွေထဲက တယောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ် ရွေးချယ်ခဲ့တာလား မသေချာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွေးချယ်ခွင့် သိပ်ရှိခဲ့တယ်မထင်လို့ပါ
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ကျတော့ ကိုယ်က သင်တန်းပေးနေပြီ HIV/AIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲ့တော့ ကိုယ်တို့အလုပ်တွဲလုပ်ကြတဲ့ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့ကလေးတွေကို သင်တန်းပေးရတယ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဖြစ်တော့ ကိုယ်တို့ သင်တန်းပေးနေတုံး စင်ထရယ်ဟိုတယ်မှာ။ တပည့်တွေကထွက်ကြည့်ချင်ကြတယ် ကိုယ်အတန်းခဏနားပေးတယ် ကိုယ့်အထက်အရာရှိဆရာက တကယ်ဝါသနာပါ စိတ်ပါ သွားကြည့်တယ် လိုက်တယ် အားပေးတယ် ဝင်ပါတယ် ကိုယ်ကတော့ ဘာသိဘာသာပဲ နောက်သင်ရမယ့် သင်ခန်းစာကို ကြိုကြည့်နေတယ် ပြောချင်တာ က အဲ့ဒီ ဘက်မှာ ပါဝင်ချင်တဲ့စိတ် ကိုယ်ခံအား အားနည်းတာပါ အားနည်းဆို စိတ်ပါဝင်စားဖို့အခြေအနေမပေးခဲ့ဘူး ကိုယ်တို့ လူငယ်ဘဝတုံးက တရားပွဲဘာညာမရှိဘူး (ကိုယ်ကျောင်းသားဘဝက ၄၂ စီးရတော့ လိုင်းကားက တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းဟောင်းကဖြတ်ရင် ဒေါ်စု သူ့အိမ်ရှေ့မှာတရားထွက်ဟော်တာမှတ်မိနေတယ် နောက်အစိုးရက လမ်းပိတ်လိုက်တာာ ဒေါ်ဂွက်ထော် နဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ အဲ့တာကို သရော်ပြီး ရိုက်ခိုင်းတာ ဒေါ်ဂွက်ထော်အိမ်ကို ခဲနဲ့အပေါက်ခံရတာ တွေတော့ မှတ်မိနေတယ်) ကိုယ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမပြောကြဘူး ကိုယ်တို့သိတာ ၁၀တန်း။ ကျောင်းစာ။ နောက်တော့ ပိုက်ဆံရှာ။ ဒါပဲ။ အခြေအနေအချိန်အခါမပေးခဲ့တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် အခြေအနေအချိန်အခါပေးခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်အမြင်တွေ အတွေးတွေ ယုံကြည်မှုတွေ တခုခု ပြောင်းလဲလာမလားမပြောနိုင်ဘူး နောက်တခုက ခုန ဒေါ်ရီတာ ပြောသလိုပဲ အဲ့လူအော်သွားတာ “မင်းတို့အတွက် အလုပ်လုပ်နေတာ” ဆိုတာ တကယ်ပဲလား ကိုယ်တို့အကျိုးအတွက် သူတို့တကယ့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ပေးနေတာလား ကိုယ်မပြောနိုင်ဘူး ကိုယ့်လာမေးရင်တော့ ကိုကမယုံဘူးလို့ပြောရမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မကြုံခဲ့ရလို့ ယုံကြည့်ရလောက်အောင် အားကိုးရလောက်အောင် ကျိုးစာခဲ့တဲ့ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမျိုးကိုယ့်တို့ခေတ်မှာ မကြုံခဲ့ဘူး ကိုယ်သိတာ သမိုင်းထဲက ကိုအောင်ကျော်ပဲ အဲ့တာကြောင့် အဲ့လမ်းကိုခဏခဏရောက်တယ် ကေအမ်ဒီတက်တုံးကရယ် YES မှာ english တက်တုံးကရယ် နောက်တော့ ကိုယ့်ညီလေး st mary church မှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားနေတုံးကရယ် နောက် ကိုယ် တရုတ် တိုးဂိုက်လုပ်တော့ အဲ့မှာ china airline company ရှိလို့ရယ် စသဖြင့်ပေါ့လေ တခါတခါ စဉ်းစားမိတယ် လူတွေက အပြောင်းအလဲ ကိုတကယ်မလိုချင်ကြလို့ တကယ်မပြောင်းလဲအောင်မလုပ်ကြတာလား လို့တွေးမိတယ် ဒါမှမဟုတ် တချို့လူတွေပြောပြောနေကြသလို ကိုယ်တို့မြန်မာတွေနဲ့ မတန်သေးလို့ တန်တာ နဲ့ပဲနေနေရ တာလားပေါ့ နောက်ကိုယ်လုပ်ငန်းထဲမှာ ကြုံဖူးတာကလဲ အဲ့တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေက ကိုယ်တို့ ပေါ့စတစ်တွေကို အသုံးချ ဘန်းပြ ပြီးလုပ်စားသွားတာတွေပဲမြင်ခဲ့ဘူးတယ်လေ ဆေးပေးမယ်ဆိုပြီး အဖွဲ့ထဲဝင်ခိုင်းတာ ဆုတောင်းပွဲတွေမှာ အင်အားပြခိုင်းတာ ကိုယ်ပြောချင်တာ အဲ့လိုကိစ္စတွေကို သေချာနားလည်လို့ စိတ်ပါလို့ ယုံကြည်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ကြ မသိနားမလည်တဲ့လူတွေကို လိုအပ်တာ တခုခုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ရောရောင်မလုပ်ခိုင်းနဲ့ လုံးဝမကြိုက်ဘူး သဘောလဲမတူဘူး အဲ့တာ အသုံးချတာသက်သက်ပဲ
"(သိပ်မကောင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ပဲ တွေ့ရတာ ကံမကောင်းလို့
Posted by တီချမ်း at 12:22 AM
အန်တီချမ်း December 7, 2009 at 6:05 AM
7 Dec 09, 02:51
အိအိခင်: နောက်ဆုံးပို့ စ်က ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ တို့ရီတာဆီမှာလဲ မန့် ထားခဲ့တယ်။
7 Dec 09, 02:53
အိအိခင်: ကောင်းတာ အကျိုးရှိတာလေးတွေ ဆက်လုပ်ပါ။ ဒါလဲ နိုင်ငံရဲ့အရေးပါပဲ။
7 Dec 09, 02:55
အိအိခင်: တယောက်ခြင်းစီ အားလုံး ပြောင်းလဲလာကြရင် စနစ်တခုလုံးလဲ ပြောင်းလဲ လာပါလိမ့်မယ်။ ဘိုင် ...
Rita December 7, 2009 at 8:47 AM
Addy တခုတော့ တောင်းပန်ပါရစေ။ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ စိုင်းစိုင်းကိစ္စ သိလဲ မသိ။ စိတ်လဲ မဝင်စားပါ။ အရင်က ကြားတောင် မကြားဖူးပါ။ Note Book ကတော့ ဝယ်ထားတာ ကြာလှတာတောင် မကြည့်ရသေးဘူး။ စာအုပ် လုံးဝ စိတ်မဝင်စားပါ။
ဒီ post အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Rita December 7, 2009 at 11:13 AM
ဒီကို မလာခင် ဘာချက်ကျွေးမလဲ MENU လေး တခါတည်း ဆွဲထားပါလား။
နန်းညီ December 7, 2009 at 1:57 PM
နိုင်ငံရေးတွေဆိုရင် အရမ်းကြီးတော့ နားမလည်ပါဘူး.. အဲလိုစာမျိုးတွေဆို နည်းနည်းလည်း ဖတ်ပျင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် လုံးဝမသိတဲ့ နလပိန်းတုံးဖြစ်တဲ့ထိတော့ မနေမိဘူး.. လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်း ဘာမှကို မပြောလိုဘူး.. တီချမ်းပြောသလိုပဲ “အဲ့ဒီ ဘက်မှာ ပါဝင်ချင်တဲ့စိတ် ကိုယ်ခံအား အားနည်းတာပါ” ပေါ့.. “ကိုယ့် အရေးကိစ္စ
ကွက်ကွက်ကလေးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ အတ္တကြောင့်” သက်သက်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲနော်..
မကေဘလော့မှာ generation gap ကိစ္စ အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတာ ဖတ်ပြီးမှ ဒီကိုရောက်လာတာ..
Bino December 7, 2009 at 2:46 PM
Nothing to say related post.
Everybody can be hero when they haveachance.
You can watch Dustin Hoffmin's "HERO"
အန်တီချမ်း December 7, 2009 at 6:45 PM
JulyDream December 10, 2009 at 11:10 PM
zaw December 14, 2009 at 6:51 PM
after I read this post, I respect you more.
Say hello..your လင် ချောချော
Anonymous January 5, 2010 at 9:51 PM
Say hello..your လင် ချောချော . for me.
ုရုပ်ရှင်မင်းသား ကိုကျော်သူတို့လို ဘာမှကို မပြောပဲ တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ချင်ပါတယ်။
လုပ်နေကြတယ်ဆိုလည်းပါချင်ပါတယ်။ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအားပေးပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် အခွင့်မလမ်းတွေသယ်လာပေးကြပါ။ ပိတ်မထားကြပါနဲ့။ တိုင်းပြည်မနာအောင်စဉ်းစားကြပါ။
Cheer for the post; T Chan.